China Yakakwira-mhando uye chaiyo chikafu dhijitari thermometer WT-1 Kugadzira uye Fekitori | Sanhe
Peni dhizaini, 125MM dzesimbi simbi yekuona matipi, yakanangana kuyera, inotakurika, yakafara kuyera renji
Inokodzera firiji, kudziyisa uye kugadzira chikafu nezvimwe.
Kupisa kuyera renji: -50 ℃ ∽ + 300 ℃ (-58 ℉ ∽ + 572 ℉)
Kururama (-20 ℃ ~ 80 ℃) ± 1 ℃
Kupisa kuyerwa ndangariro basa
Kuyera tembiricha uye yakaderera magetsi kuratidza basa
Simba rekuchengetedza basa: Kana pasina oparesheni mukati memaminitsi gumi nemashanu, inozovhara yega
Switch kutadza kuratidza
Fahrenheit uye Celsius inoratidza basa kutendeuka
[ON / 0FF]: Dhinda kiyi iyi kuvhura kana kudzima. Icharatidza yekupedzisira yakayerwa tembiricha kwemasekondi 1.5 mushure mekubatidza muchina, uye wozopinda muyero modhiyo. Kana pasina oparesheni, inozovhara yega mushure memaminitsi gumi nemashanu.
[℃ / ℉]: Dhinda iyi kiyi mumamiriro ekuyera tembiricha kuti uone shanduko pakati peFahrenheit neCelsius.
Kuyera kwetembiricha uye yakaderera magetsi kuratidza: Kana iyo voltage iri yakaderera pane 1.3V, iyo LCD icharatidza - "low voltage".
Kana iyo sensor yakavhurwa kana pazasi peyero yekuyera, inozoratidza E00, kana iyo sensor iri pfupi-kutenderera kana iyo chaiyo tembiricha yakakwira uye chiyero E11 chinoratidzwa kana chiri muchikamu.
Pashure: Maindasitiri firiji yemagetsi thermometerTPM-900
Zvadaro: Chikafu chemagetsi thermometer WT-2 yekicheni
digital nyama thermometer
pakarepo kuverenga nyama thermometer
Electronic thermometer yekuyera temperatur ...
LCD inoratidzira peturu dhijitari thermometer ST-1A
aquarium yedhijitari thermometer, Incubator tembiricha controller, digital thermostat controller, thermostat tembiricha controller, thermometer yedhijitari, otomatiki tembiricha kudzora,